by Trey Hilburn III Jona 7, 2021 3,026 hevitra
Rob Zombie dia karazana karatra bibidia. From Tranon'ny Corpn 1000 ny 31, Zombie dia hery tokony isaina ary teboka fizarazarana tanteraka eo amin'ireo mpankafy. Rob Zombie dia mitonona ho tenany Ny Munsters fanatisme. Nanome ny feony tamina fanehoan-kevitra vao haingana aza izy Ny Munsters làlan'ny fanehoan-kevitra blu ray. Ilay rangahy, manana tehina mafana aza antsoina hoe Dragula namboarina ho modely Ny Munsters fiara. Zombie dia nanamafy ny tsaho efa ela nino fa handray ny fampifanarahana sitcom TV Ny Munsters.
Toa ny zava-misy fa ny Zombie mankany Budapest hiasa amin'ny tetikasa amin'ny faran'ity taona ity dia natao ho an'ny The Munsters. Manantena izahay ny hahita ireo mahazatra ao amin'nyNy Munsters fam Manomboka amin'ny vadin'i Sheri Moon Zombie toa an'i Lily Munster, sy Jeff Daniel Phillips mety hilalao an'i Herman.